प्रकाशको फैलिदो प्रकाश — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » देवदह-रत्न, विशेष → प्रकाशको फैलिदो प्रकाश
July 1, 2016९२७ पटक
(देवदह रत्नमा हामीले देवदहका अनमोल रत्नहरुलाई तपाईको माझमा चिनाउँदै आएका छौ । आजको चौथो श्रृङ्खलामा हामीले तपाईको माझमा चिनाउने प्रयास गरेका छौ, एउटा सफ्टवेयर डेभलपरलाई । चौथो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ वि.सं. २०४५ साल चैत २९ गते रुपन्देहीको भैरहवामा जन्मेका प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो देश र समाजलाई रुपान्तरण गर्ने दृढ संकल्प लिएका देवदहका अर्का अनमोल रत्न प्रकाश न्यौपाने बारे देवदह साप्ताहिकमा २०७३ असार १३ गते सोमबार प्रकाशित विनोद उदयको यो आलेख – सम्पादक । )
सन् २०१३, सेप्टेम्बर ३,
जोहानेसवर्ग, दक्षिण अफ्रिका
कोफी अन्नान : जिम्मेवारी लिनका लागी तपाई निश्चित उमेरको हुनुपर्दैन ।
प्रो. मोहम्मद युनुस : तपाई यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली पुस्ता हुनुहुन्छ, तपाई केही खास हुनुहुन्न तर भाग्यमानी हुनुहुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नान र नोबेल पुरस्कार प्राप्त विख्यात व्यक्ती प्रो. मोहम्मद युनुसले भनेका माथिका भनाईहरु सिरानमा दिइएको समय र स्थानमा भएको एउटा भव्य सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचारहरु थिए । के थियो त त्यो सम्मेलन? किन यसरी यहाँ अकस्मात् आइपुग्यो यो प्रसङ्ग? आउनुस् त्यतातिर लागौ ।
विश्वका उर्जावान् युवाहरु जसले विश्वलाई नै प्रभाव, परिवर्तन र नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छन् त्यस्ता युवाहरुलाई गोलबन्द गर्ने एउटा संस्था छ, ‘One Young World’, जसले प्रत्येक वर्ष विश्वका हरेक देशका युवाहरुबाट उत्कृष्ठ युवाहरु छनोट गरेर ‘One Young World Summit’ नामको सम्मेलनको आयोजना गर्छ । यो संस्थाले कुनै निश्चित क्षेत्रबाट नभई हरेक क्षेत्रलाई समेटेर छनोट गर्ने हुँदा पनि यो सम्मेलन बिशेष छ । यसैको निरन्तरताको क्रममा यसले सन् २०१३ को सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा विश्वव्यापी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । जहाँ विश्वका १९९ देशका युवाहरु सामेल थिए । त्यो क्षमतावान् युवाहरुको समूहमा हाम्रो देशबाट पनि एक युवा देशको एक्लो प्रतिनिधि बनेर उपस्थित भएका थिए । ति युवा हुन्, हाम्रै पावनभूमि देवदहका, प्रकाश न्यौपाने । सुन्दा/पढ्दा नै गर्वले छाती चौडा भईजान्छ ।
माथीको सन्दर्भले जानिदैन कि उनी को हुन्? उनी के कारणले त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि छनोटमा परे त ? अथवा उनको योगदानको क्षेत्र कुन हो?
उनको रुची, पेशा र योगदानको क्षेत्र हो कम्प्युटर विज्ञान, त्यसमा पनि सफ्टवेयर डेभलपिङ । र उद्यमशिलता पनि । उनले यो क्षेत्रमा ठुलो सफलता हासिल गरेका छन् । देशलाई पनि ठुलै योगदान दिएका छन् । कम्प्युटर प्रविधिमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मानिन्छ, आइडिया अर्थात् Concept । उनले विकसित गरेको आइडियाले उनलाई सामान्य प्रकाश न्यौपानेबाट आजको सफल सफ्टवेयर डेभलपर तथा उद्यमी प्रकाश न्यौपाने बनाएको हो । उनी नेपालका सफल र उम्दा सफ्टवेयर डेभलपर हुन् ।
आजभन्दा करिब पौने तिन दशक अघिको समयमा रुपन्देहीको भैरहवामा जन्मेका उनको शिक्षादिक्षा पनि भैरहवाबाटै सुरु भयो । कक्षा ३ सम्म भैरहवामै, कक्षा ७ सम्म गुल्मीको रिमुवामा, प्रवेशिका परिक्षासम्म रुपन्देहीको देवदहमा (देवदह मा. वि) अध्ययन गरेर उनले आफ्नो माध्यमिक शिक्षा सिध्याए । उच्च शिक्षा अन्र्तगत काठमाडौको अमृत साइन्स कलेजबाट आईएस्सी हुदै कम्युटर विज्ञान तथा सुचना प्रविधि (CSIT) विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरे । उनको शैक्षिक अवस्थाको एकमुष्ठ आँकडा यही नै हो । सानै देखि तिक्ष्ण क्षमताका उनी अध्ययनकालमा CSIT पढ्ने विद्यार्थीहरुको संगठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि भए । प्रविधिसंगको उनको प्रेम सानै देखिको हो । अध्ययन पनि त्यसैमा गरे । अब पालो थियो कर्मक्षेत्रमा उत्रने । अधिकांश सहपाठी साथीहरु काम र दामको खोजीमा विदेशतिर लागे । तर प्रकाशलाई भने विदेशी डलरले उतीसारो आर्कषित गर्न सकेन । देशभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले उनमा पहिल्यैदेखि नै घर गरिरहेको थियो । अब उनमा आफ्नो सोच अनुसारको काम गर्ने बेला आइसकेको थियो । प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो देश र समाजलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास र रुचिका कारण उनी त्यस्तै अभियानको खोजीमा लागे । र भेट्टाए पनि । उनले त्यस्तै उद्देश्यका साथ संचालित विभिन्न संघसंस्थाहरुमा जागिरेको रुपमा काम गर्न थाले । देशभित्रै बसेर प्रविधिको प्रयोग मार्फत् देशका लागि केही गर्न पाउँदा उनी खुसी मात्रै भएनन्, पहिलेको भन्दा दोब्बर मिहेनेती र उर्जाशिल पनि बने । काम र विषयप्रतिको लगन र जिज्ञासुपनले उनले थप ज्ञान बटुल्न सके । आफूलाई अझ तिर्खान सके ।
रातदिन नभनी काममा खटिरहने उनको बानीले उनको भविष्यको बाटो बन्दै गयो, अवसरको ढोका खुल्दै गयो । उनको रुची, लगनशिलता र नेतृत्व क्षमताका कारण उनी आबद्ध कम्पनीहरुले विश्वका विभिन्न देशहरुमा हुने अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सेमिनार, सम्मेलन तथा अध्ययन अनुसन्धानका काममा उनलाई नै पठाउन थाले । यसरी उनी विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग पनि जोडिदै गए । उनी विश्वव्यापी संजाल निर्माणमा सिपालु हुदै र देखिदै गए ।
रातदिन नभनी काममा खटिरहने उनको बानीले उनको भविष्यको बाटो बन्दै गयो, अवसरको ढोका खुल्दै गयो । उनको रुची, लगनशिलता र नेतृत्व क्षमताका कारण उनी आबद्ध कम्पनीहरुले विश्वका विभिन्न देशहरुमा हुने अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सेमिनार, सम्मेलन तथा अध्ययन अनुसन्धानका काममा उनलाई नै पठाउन थाले । यसरी उनी विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुसंग पनि जोडिदै गए । उनी विश्वव्यापी संजाल निर्माणमा सिपालु हुदै र देखिदै गए । बिशेष गरी प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ खोज र ज्ञानमा अत्यन्तै उत्सुक उनको स्वभावले उनी सबैको नजरमा पर्न सफल भए । त्यसैको नतिजा हो, ‘One Young World’ को जोहानेस वर्गको सम्मेलनमा छनोट हुनु ।
उक्त सम्मेलनमा भाग लिनु आफ्नो जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट मान्छन् उनी । “हामीले त आफ्नो र आफ्नो देशका लागि मात्रै सोच्दा रैछौ”, उनले भने, “सोच्नुपर्ने त विश्वकै लागि रहेछ । उक्त सम्मेलनले मेरो सोचाइको दायरा फराकिलो पारिदियो ।” त्यसपछि उनले सोचे, ‘यस्तो काम गर्न सकियोस् जसबाट देशलाई त फाइदा होस् नै विश्वभरीका मानिसहरुका लागि पनि फाइदा पुगोस् ।’ उनी जोहानेसवर्ग सम्मेलनमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नै काम र सेमिनारको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशहरुमा जाँदा ‘म नेपालबाट आएको हुँ’ भन्दा कसैले नचिनेको तर सगरमाथा र गौतम बुद्धको नामबाट सबैले चिनेको घटनाबाट उनी भित्र प्रविधि मार्फत् देशलाई विश्वसंग जोड्ने हुटहुटी पलाइसकेको थियो । जोहानेसवर्गको सम्मेलनले त्यो हुटहुटीको आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । उनले नेपालको पर्यटनलाई प्रविधिसंग जोडेर काम गर्ने योजना बनाए । उनले आफूले गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरुको अनुसन्धान गर्न थाले । हवाई उडान, होटेल, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ, हात्ती सवारी आदि क्षेत्रहरुको गहिरो अनुसन्धान पश्चात् उनले हवाई उडानमा काम गर्ने निर्णय गरे । आफ्नो जस्तै सोच र उर्जा भएका साथी मनिष अमगाई संग मिलेर ‘NepFlights’, नामक सफ्टवेयर बनाए । र यसलाई कम्पनीको रुप पनि दिए । सन् २०१४ अप्रिल २४ मा स्थापना भएको ‘NepFlights’, ले उनलाई एकाएक चर्चामा ल्यायो । यो नेपालको पहिलो API (Application Programme Interface) अनलाइनमा आधारित घरेलु हवाई बुकिङ सिस्टम हो । यो नेपालको प्रविधिको क्षेत्रमा पनि र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि ठूलो उपलब्धि हो ।
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका उनको बाल्यकाल सुखद् नै बित्यो । उनको दुख त्यहाँबाट सुरु भयो जब उनले ‘NepFlights’ को सुरुवात गरे । यो उनको लागि एउटा कठिन परीक्षा साबित भयो । परीक्षाबाट डराउने, भाग्ने उनको स्वभाव थिएन । र परीक्षामा अनुतिर्ण भई हाल्ने बानी पनि थिएन । हो यही दुखको बिउ रोपेर नै उनले आजको सफलताको रुख उमार्न सकेका हुन् ।
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका उनको बाल्यकाल सुखद् नै बित्यो । उनको दुख त्यहाँबाट सुरु भयो जब उनले ‘NepFlights’ को सुरुवात गरे । यो उनको लागि एउटा कठिन परीक्षा साबित भयो । परीक्षाबाट डराउने, भाग्ने उनको स्वभाव थिएन । र परीक्षामा अनुतिर्ण भई हाल्ने बानी पनि थिएन । हो यही दुखको बिउ रोपेर नै उनले आजको सफलताको रुख उमार्न सकेका हुन् । सूरुमा उनको कामलाई हवाई कम्पनीहरु, ट्राभल एजेन्सीहरु, होटेलहरु कसैले पनि गम्भिर रुपले लिएनन् । विश्वास गरेनन् । काम गर्न इच्छुक भएनन् । तर प्रकाशले हार खाएनन् । भनिसकियो उनी परीक्षामा अनुतिर्ण हुने खालका थिएनन् । उनले आफ्नो कामलाई स्थापित र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न धेरै पापड बेल्नुप¥यो, बेले । विस्तारै विस्तारै उनको कामले प्रशंसा पाउन थाल्यो, धेरैले विश्वास गर्न थाले । त्यसपछि जे भयो चमत्कार नै भयो । उनको कामको चर्चा देशभित्र मात्र सिमित भएन । विश्वभरी दौडियो । ‘NepFlights’ ले सन् २०१५ मा ‘2015 Red Herring Top 100 Asia’ अवार्ड नै जित्यो । यो अवार्ड नयाँ आइडियामा स्थापना गरिएको जुनसुकै बिषयको एसियाका उत्कृष्ट १०० वटा कम्पनीलाइै प्रदान गरिन्छ । यसले अर्को ‘Reconnect Award 2015′, सेकेन्ड रनर अप’ अवार्ड पनि जित्यो । ‘NepFlights’ ले अवार्ड जित्ने क्रम रोकिएन । कस्तो सुखद् संयोग भने मैले यो आलेखको बिट मार्नै आँटेको थिए, २०७३ असार ०८ गते नेपालमै पहिलो पटक ‘लिभिङ विथ आइसिटी’ले आयोजना गरेको ‘ICT Startup Award’ को उपाधि पनि जित्यो । ‘NepFlights’ ले प्रकाशको क्षमता तथा परिचयको आयामलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।
आफूलाई खासै सफल नठान्ने प्रकाशले आजसम्मको उपलब्धीको कारण परिवार भएको मान्छन् । उनी भन्छन्, “बुवाआमाको असल संस्कार र केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणाले नै यहाँ सम्मको आइपुगेको हुँ । मैले जे काम गर्छु भने पनि निर्धक्क विश्वास गर्ने र साथ दिने मेरो परिवार नै मेरो सफलताको कारण हो ।
हाल उनी ‘नेप्फ्लाइट’को स्तरोन्नती र प्रमोसनमा मात्रै व्यस्त छैनन् । उनी कम्प्युटर र सूचना प्रविधि पढीरहेका विद्यार्थीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने काम पनि गर्छन् । त्यसैको लागि उनी देशका विभिन्न कलेजहरु, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुमा हिडिरहन्छन् । ज्ञान बाड्छन्, सकेको सहयोग पनि गर्छन् । त्यति मात्रै होइन भुकम्पपछिको नेपालको पर्यटनमा आएको जर्जर अवस्था उकास्नको लागि पर्यटन बोर्डसंग मिलेर www.nepalnow.org मार्फत् काम गरिरहेका छन् । उनी निकट भविष्यमा ‘नेप्फ्लाइट’ मार्फत् बिशाल सम्भावनाको बिशाल बजार चीनमा पनि केही गर्ने दाऊमा छन् । उनको बढ्दै गइरहेको सपना, उर्जा, ख्याती र सफलतामा हाम्रो शुभकामना ।
परिवारका एक्ला छोरा प्रकाशका ३ जना बहिनीहरु छन् । र अर्को जानकारी उनी अविवाहित छन् । आफूलाई खासै सफल नठान्ने प्रकाशले आजसम्मको उपलब्धीको कारण परिवार भएको मान्छन् । उनी भन्छन्, “बुवाआमाको असल संस्कार र केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणाले नै यहाँ सम्मको आइपुगेको हुँ । मैले जे काम गर्छु भने पनि निर्धक्क विश्वास गर्ने र साथ दिने मेरो परिवार नै मेरो सफलताको कारण हो ।” उनले अगाडि भने “म सफल हुनुको अर्को कारण मैले पहिलेदेखि नै आफ्नो रुचीको क्षेत्रमा हात हाल्नु हो । आफ्नो गहिरो रुचिको विषय भएकाले नै काममा म सधै इन्जोय गरिरहेको हुन्छु । जति काम गरेपनि थकाइ लाग्दैन, वाक्क लाग्दैन ।” त्यसैले उनी अरुलाई पनि आफ्नो रुची र क्षमताको क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडी बढ्न सल्लाह दिन्छन् ।
आफ्नो थातथलो देवदहका लागि के छ त उनको योजना? उनका मुख्यतया दुई योजनाहरु छन्, १) देवदहलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न देवदहका सम्बन्धित साथीहरुसंग समन्वय गरेर काम गर्ने । २) देवदह ऐतिहासिक र पर्यटकीय ठाउँ भएकोले यहाँको पर्यटकीय स्थल र बिशेषतालाई प्रविधिको प्रयोग गरेर उजागर गर्ने, प्रमोसन गर्ने । उनका आर्कषक योजनाहरु कार्यान्वयनमा हामी पनि सहभागी बन्ने कि?
उनी भर्खर त २७ औ बर्षमा हिड्दैछन् । यो कलिलो उमेरमा उनले गरेको मेहेनत र हासिल गरेको उपलब्धी पक्कै पनि लोभलाग्दो छ । प्रेरणादायी छ । प्रकाश देवदहका चम्किला तारा हुन् । प्रकाशलाई देवदहको माया, साथ र आर्शिवाद सदैव रहनेछ ।